သကျသာကီနွယ်ဝင်အပျိုစင်နှင့် ဗုဒ္ဓငယ်လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » သကျသာကီနွယ်ဝင်အပျိုစင်နှင့် ဗုဒ္ဓငယ်လေး
Posted by kai on Aug 29, 2010 in History, Opinions & Discussion, Think Tank |4comments
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးလန့်မသွားပါနဲ့။ ဒါတွေက အချက်အလက်တွေကိုမှီငြမ်းရေးတာပါ။
သိကြတယ်နော..။ အဲဒီ ၂နိုင်ငံလုံးက ထောင်ချီသက်တန်းရှိတဲ့ သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ဆိုတာ..။
တိဘက်နဲ့နီပေါ ပါခင်ဗျား။ တိဘက်ဆိုတာက မြန်မာပြည်ကို ၀ိပသနာမျိုးစေ့ သယ်လာပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နိုင်ငံ။ နီပေါက..ဂေါတမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာ ..ဒေသ..။
အတွေးတွေပေါ်လာအောင် အောက်က ဓါတ်ပုံသတင်းလေး၂ခု ဒီအတိုင်းပဲတင်လိုက်ပါတယ်။ ဆက်စပ်စဉ်းစားရင်း သမိုင်းခြေရာခံကြည့်၊ အတိတ်စိမ်းကောက်ကြည့်ပေါနော..။
LIVING GODDESS: Devotees paid their respects toaliving goddess known locally as Kumari during the Gaijatra festival in Katmandu, Nepal, Thursday. It is the tradition that the living goddesses are selected between the ages of2and 4; judges examine the children in ancient ceremonies and check them for physical imperfections. (Binod Joshi/Associated Press)
နီပေါနိုင်ငံတွင် အပျိုစင်တချို့သည် နတ်ဘုရားများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ သူတို့ကို ကုမ္မာရီ ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး ဟိန္ဒူရိုးရာ ဓလေ့အရ ရှိခိုးပူဇော်ကြသည်။
ငြိမ်းချမ်းခြင်း သင်္ကေတအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက ဖူးမြော်လေ့ရှိသည့် ကုမ္မာရီကို ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် သမ္မတ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဖူးမြော်တတ်သည်။
ဟိန္ဒူဓလေ့အရ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည့် ကုမ္မာရီမှာ လမ်းလျှောက်တတ်စ ၂ နှစ်ခန့် အရွယ်မှ ၁၄ နှစ် ၁၅ နှစ်အထိ ဖြစ်ကြသည်။
ဧရာဝတီဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်သည်။ http://www.irrawaddymedia.com/bur/index.php/articles/2-articles/1931-2009-10-05-11-29-41
သကျသာကီနွယ်ဝင် ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် မိသားစုမှ သတ္တိ၊ သတိရှိသော မိန်းကလေးငယ်များကိုသာ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
It appears that Bamar Buddhist tradition comes from Tibet-India-Nepal region but with slight modification.
In Tibet, Buddha appears in the form of 5-year-old in every 50 years. What about in Burma? I want to see my Buddha also in person. It is not fair that Buddha appears only in Tibet.
What? Are you saying that Bamar Buddhism is the real Buddhism and that Tibet, Chinese, Nepal Buddhism are fakes? If you do not believe in that 5-year-old Buddha and if you do not worship in that boy, you are notareal Buddhist from the Tibetan’s Buddhist standpoint.
Basically, Tibetan Buddhists do not think that Bamar Buddhists are not real. Bamar Buddhists are saying that Tibetan Buddhists are crazy.
ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူး အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ။
အင်း နားမလည်လို့ ဧရာဝတီကို သွားပီဗျို့
မ၇ှိသင့်ဘူး ဘာပြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပျိုဆင်နဲ့ဗုဒ်ဒ က မအက်ဆက်ဘူးလေ